Ikanam Poster Series mirror ikanam Display
Ime ụlọ mgbazinye Ikanam ihuenyo
Typedị :dị: P2.571mm
Ngwa: Ikanam Poster
Nha: 1944mmx 577mm
AKW -KWỌ AKW -KWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW -KWỌ AKW -KWỌ AKW -KWỌ AHvantA
Mee echiche ziri ezi ma mepụta ọhụụ ịkwụsị ike ya na ikanam Poster
AKWERSKWỌ ndozi maka EBERE
Mpempe akwụkwọ eji arụ ọrụ di iche-iche nke Avant-garde
Ejiri mpempe akwụkwọ LED LED ọhụrụ na teknụzụ kachasị ọhụrụ iji nye ya profaịlụ dị mma, slimmer. Emere ya na mara mma anodized lightweight ma na-adịgide adịgide, iji mee ka mpempe akwụkwọ mpịakọta niile dị obere karịa 35kg, na-eme ka ọ dị mfe ma dị mfe ịwụnye.
Nwee ihe ùgwù nke ikiri ma ọ bụ nyochaa vidiyo nke gị, egwu ma ọ bụ eserese eserese oge ọ bụla, ebe ọ bụla nwere akwụkwọ mmado ọkụ. Melite ọdịnaya gị dijitalụ na igwe egwu egwu anyị dị ike site na WiFi ma ọ bụ USB. Mfe ịgbaso na ihuenyo na-eme ka ọ dị mfe ịhazi oge gị ọdịnaya yana enweghị nhazi dị mgbagwoju anya achọrọ!
Ga-ahụ n'anya ngwa ngwa nke ịrụ ọrụ na nchịkọta modulu ndị na-agbanwe site n'ihu ya na ntanetị ndọta. Ekele maka teknụzụ na-enweghị eriri na-ejikọ na ijikọ modulu ahụ.Yet ọzọ uru, sọọsọ na akwụkwọ mmado gị.
Futuristic Smart Module jiri akọ wee webata ya na sistemụ ọ bụla a na-esote ya bụ ụlọ ike ya. Enyere ya gburugburu nnukwu ihe ntanetị Internetntanetị Cyclone IV FGPA nwere ike ịrụ ọrụ yiri nke ahụ, na njikọta miri emi na ngwaọrụ nlekọta MCU na-enyere modul ngosi aka ijide onwe ya na nkwukọrịta na njikwa. Ha na-etolite isi nke Smart Module ma nyefee nyiwe nhazi vidiyo dị ike, na-eme ka arụmọrụ niile gbakọta, si otú a na-ahụ njikọ na-enweghị ntụpọ dịka arụmọrụ nyocha ihuenyo na ịchọpụta ọrụ na-aga n'ihu.
Ihe eji eme ya bu ihe eji enyere gi aka iji PC ma obu ihe ndi ozo jikotara ya site na otu RJ45, WiFi, 3G, USB na HDMI. Kpọọ ọdịnaya gị site na ngwaọrụ gị ọ bụrụ laptọọpụ, mbadamba ma ọ bụ ekwentị dị mma. Mee njikwa na njikwa vidiyo nke etiti site na ịntanetị. Gị arụmọrụ na-ụba nke mbụ ị nwere ike igba gị video remotely na-enweghị mkpa nwere ihe na-saịtị na-achịkwa ngwaọrụ ma ọ bụ PC.administer na nyochaa gị video si nkasi obi gị ọrụ.
⊙ >>>>>>> Lelee ụdị zuru ezu nke akwụkwọ ntuziaka ngwaahịa PDF
Osote: P3.91 Ihe Omume N'èzí Na-agbazinye Oghere Mgbidi
P5 N'èzí Advertising ikanam Video Wall
P6 N'èzí Advertising Ikanam Screen N'ihi ppingzụ ahịa ...
ECO Pipe Series Ikanam Display Screen
Waterpoof N'èzí ikanam ákwà mgbochi ntupu
Stadium Perimeta Series P10 N'èzí Football L ...